အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 12/01/2012 - 01/01/2013
Posted by Kyaw Myat Thu at Tuesday, December 25, 2012 Tuesday, December 25, 2012 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
မနက်ခင်း အိပ်ရာမှနိုးနိုးချင်း ခေါင်းရင်းမှ ပြူတင်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်စဉ်မှာဘဲ နှင်းငွေ့တွေဖြင့် ဝေ့၀ဲလွင့်မျောကာ နုထွေးစိမ့်အေးနေသည့် လေပြေကလေးက သူမမျက်နှာကို ရုတ်တရက် ဖြန်းပက် ကျီစယ်လိုက်သည်။ မှုန်ဝါးဝါး နှင်းပွင့်လေးတွေကြောင့် ခပ်ဝေးဝေးမှာ အမြဲတမ်း ပြာလွင်လှပစွာ ရှိနေတတ်သော တောင်စဉ်တောင်တန်း အထပ်ထပ်တွေကိုပင် မမြင်နိုင်တော့အောင် ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံးက ၀ိုးတ၀ါးလေး ဖြစ်လို့နေသည်။ ကြည့်လေရာ နေရာတိုင်းကို မှုန်ဝါးဝါးလေးသာ မြင်နေရအောင်ဘဲ ဒီဇင်ဘာရဲ့ နှင်းဝတ်လွှာလေးတွေက ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံလို့ထားခဲ့ပြီ။ အမြဲတမ်း အိပ်ရာထ နောက်ကျတတ်သဖြင့် မနက်ခင်းမှာ နှင်းတွေ ဝေနေပြီ ဆိုတာကို သတိမထားမိခဲ့ဘဲ ထူးထူးခြားခြား စောစီးစွာ နိုးလာသော ဒီမနက်ခင်းလေးမှဘဲ နှင်းတွေကို သူမ မြင်တွေ့လိုက်ရတော့သည်။ တကယ်တမ်းတော့ ဆောင်းဆိုတာ နှင်းတွေရှိမှ ပြီးပြည့်စုံသလို၊ စိမ့်စိမ့်လေး အေးမှလည်း ဆောင်းရဲ့ အရသာက ပီပြင်သည်ဟု သူမတော့ ယူဆမိပါသည်။ သူမက ဖြူလွှလွှ နှင်းပွင့်လေးတွေကို ချစ်သည်လေ။ မြို့တော်ကြီးမှာ ကာလကြာမြင့်စွာ နေခဲ့ရစဉ်က ဒီလို နှင်းလေးတွေ မမြင်ခဲ့ရ၊ အေးစိမ့်သော အရသာကို မခံစားခဲ့ရဘဲ ဆောင်းဆိုတာကိုပင် မေ့လျော့ နေခဲ့မိလောက်အောင် ဒီဇင်ဘာ မနက်ခင်းတို့က နှင်းတွေ၊ အအေးဓာတ်တွေ ကင်းပလို့နေခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က သူမသည် ၁၀တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် တက္ကသိုလ်မတက်ခင်စပ်ကြား အားလပ်နေသဖြင့် တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စောင့်ရင်း သူမ ဇာတိရွာကလေး၏ အလယ်တန်းတွင် ကျောင်းဆရာမ ပြန်လုပ်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက သူမ စာသင်ကြားဖို့ တာဝန်ပေးသည့်အတန်းက သူငယ်တန်း(ခ) ဖြစ်သည်။ စာသင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံလည်းမရှိ၊ ငယ်ရွယ်သေးသော အချိန်လည်းဖြစ်သောကြောင့် ကလေးငယ်များကို စာသင်ရခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းရခြင်းသည် သူမအတွက်တော့ ခက်ခဲသော အလုပ်တစ်ခုပင် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် သူငယ်တန်း(က)ကို သင်ကြားသော ဆရာမမှာ သူမတို့ ဒီကျောင်းမှာ တက်ခဲ့စဉ်ကတည်းက သူငယ်တန်းကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် သင်ခဲ့သော ၀ါရင့် အတွေ့အကြုံရှိ သူမ၏ ငယ်ဆရာမ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရော၊ သူမ၏ ငယ်ဆရာမကပါ ကလေးငယ်များအား စာသင်ကြားရေးသာမက၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုစုပျိုးထောင်ပုံပါ နည်းလမ်းနှင့် အကြံဥာဏ်ပေးပါသည်။ ဒီကျောင်းသည် သူမ ငယ်စဉ်ကတည်းက တက်လာခဲ့သော ကျောင်းဖြစ်ပြီး အလယ်တန်း ရောက်မှသာ မြို့တွင် ကျောင်းသွားတက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသည် သူမနှင့် မစိမ်းလှသလို ဆရာ၊ဆရာမ တော်တော်များများသည်လည်း သူမကို စာသင်ပေးခဲ့ဖူးသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ပြီးတော့လည်း ဆရာဆရာမတွေရော ကျောင်းတော်ကြီးကပါ သူမကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုကြပါသည်။
သို့သော်.. သူမစာသင်ရသော အတန်းတွင် ကလေးငယ်များ အားလုံးတော့ သူမ၏ စာသင်ကြားမှု အစီအစဉ်၊ ပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်တို့တွင် လိုက်ပါ စီးမျှောနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား တစ်ဦးသော ကလေးငယ်မှာ စာသင်ချိန်လျှင် လိုက်ဆိုခြင်းမရှိဘဲ သူတစ်ဦးတည်း ဆော့နေခြင်း၊ ပုံပြောလျှင် (သို့မဟုတ်) သီချင်းဆို၊ ကဗျာရွတ်လျှင်လည်း သူ့ စာအုပ်လေးထဲတွင် ဟိုခြစ်သည်ခြစ် ခြစ်နေခြင်း၊ ခုံပေါ်တွင်အိပ်နေခြင်း၊ တွေဝေငေးမောနေခြင်း စသဖြင့် လုပ်နေတတ်သည်။ ထိုကျောင်းသားလေး အမည်မှာ နော်ဆိုင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် နော်ဆိုင်းသည် ပုံဆွဲ ၀ါသနာပါပုံရပြီး လူရုပ်၊ ငှက်ရုပ်၊ စက်ရုပ် စသည်ဖြင့် သူစိတ်ကူးပေါက်ရာ အရုပ်များ ရေးဆွဲနေတတ်သည်။ အခြားသူများနှင့် ပြောဆို ရယ်မောခြင်းလည်းမရှိ၊ တစ်ယောက်ထီးတည်းဖြင့် အပြုံးအရယ်ကင်းမဲ့စွာ နေလေ့ရှိသည်။ အခြားကလေးများက သူ့ကိုစနောက်လျှင်လည်း ခဲတံဖြင့် ထိုးခြင်း၊ တွေ့ရာဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပေါက်ခြင်း စသည်ဖြင့် တုံ့ပြန်တတ်သည်။ သူ့ကြောင့် အနာတရဖြစ်ရသော ကလေးများလည်း မနည်းတော့ပေ။ သူမက ပြောဆိုဆုံးမသည်ဖြစ်စေ၊ အပြစ်ပေးလျှင်ဖြစ်စေ မထီမဲ့မြင် ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြန်လည်းမပြော နားလည်းမထောင် နေလေ့ရှိသလို သူမအားလည်း ရန်လိုသော အကြည့်ဖြင့် ကြည့်နေတတ်ခဲ့သည်။ တခါတရံ ကျောင်းအားလပ်ချိန် ၁၅မိနစ်ဆင်းပြီး ကျောင်းပြန်တက်လျှင် နော်ဆိုင်းမှာ ကျောင်းခန်းထဲတွင် မရှိတော့ဘဲ အိမ်ပြန်သွားတတ်ပြန်သည်။
နှင်းငွေ့တို့ဖြင့် သိုင်းခြုံရစ်ထွေးထားသော သူမမွေးရပ်မြေ၏ ဒီဇင်ဘာဆောင်းသည် ချမ်းအေးလှသော်လည်း ကျောင်းခရစ္စမတ်ပွဲရက်မို့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းက အချမ်းဒဏ်ကို မေ့လျော့ကာ ပျော်ရွှင် တက်ကြွနေကြသည်။ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်များ အလှဆင်ခြင်း၊ အသံချဲ့စက်များ တတ်ဆင်ခြင်း ၊ ကျောင်းဟောခန်းမတွင် တစ်ကျောင်းလုံးအတွက် ထိုင်ခုံနေရာများ ချထားခြင်း၊ တစ်ကျောင်းလုံး စားသောက်ရန်အတွက် ကြက်သားဆန်ပြုတ် ပြုတ်ခြင်းတို့ကို တာဝန်ခွဲဝေထားသော ဆရာဆရာမများက ဦးဆောင်ပြီး အတန်းကြီး ကျောင်းသားများဖြင့် စုပေါင်းကာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ပြင်ဆင်နေကြသည်။ တစ်ကျောင်းလုံးအတွက် ဆန်ပြုတ်အိုးကြီးမှာလည်း အငွေ့တစ်ထောင်းထောင်း အနံ့တသင်းသင်းဖြင့် မွှေးပျံ့၍ နေပေတော့သည်။ ကျောင်းခရစ္စမတ်ပွဲရက်တွင် သူမတို့ကျောင်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံး မိမိတို့၏ ဆရာဆရာမများကို ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်လေးများ ပေးလေ့ရှိသလို အတန်းကြီးကျောင်းသားများက အတန်းသားအချင်းချင်းလည်း ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ လှဲလှယ်လေ့ ရှိကြသည်။ ကလေးများပေးသည့် ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်လေးများမှာ ပြက္ခဒိန်၊ စာအုပ်၊ ပိုစ့်စကဒ် စသည်မှ အမျိုးမျိုးသော လက်ဆောင်ကလေးများ ပါဝင်ကြသည်။ သူမစားပွဲပေါ်တွင်လည်း ကလေးငယ်များပေးသော ပြက္ခဒိန်လေး၊ ပန်းကလေးများ၊ အရုပ်သေးသေးလေးများ၊ ခရစ္စမတ် ရင်ထိုးကလေးများ စသဖြင့် တန်ဖိုးမကြီးသော်လည်း အမြတ်တနိုး အမှတ်တရပေးသော လက်ဆောင်များဖြစ်၍လည်း လှပ ချစ်စရာကောင်းနေပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂-နှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုလေးပါ။ ခရစ်စမတ်ကာလအတွက် အသစ်မရေးဖြစ်လို့ အဟောင်းလေးကိုပဲ မဖတ်ရသေးသူများ အတွက်ရော ဖတ်ပြီးသူများအတွက်ပါ ဖတ်လို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, December 21, 2012 Friday, December 21, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
၂၀၁၂ ရဲ့ မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားပြန်ပါပြီ။ မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲ တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မချောတစ်ယောက် ခုလည်း ဘယ်သူတွေ ဆုရရှိသလဲဆိုတာ စပ်စုမိပြန်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ တုန်းကတော့ အသားညိုညို ချစ်စရာအင်ဂိုလာမယ်လေးက သရဖူဆောင်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနှစ်၂၀၁၂ ရဲ့ ၆၁ကြိမ်မြောက် မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲရဲ့ သရဖူပေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ လာဗေးဂတ်စ် Planet Hollywood Resort and Casino မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၈၉နိုင်ငံက အလှမယ်တွေ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်များဟာ အသက် ၁၉နှစ်ကနေ ၂၆နှစ်အထိ ပါဝင်ကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို အကဲဖြတ်ဒိုင်သူကြီး ၈ဦးက အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးခဲ့ကြရာမှာ ယခင်က Miss Universe ပြိုင်ပွဲဝင်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Miss USA Crystle Stewart လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ပြောရရင် သူပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာ စင်ပေါ်မှာ ချော်လဲခဲ့တဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦးပါ။ မနှစ်က Miss Universe သရဖူဆောင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ အန်ဂိုလာမယ် Leila Lopes တို့ကလည်း အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကြရာမှာ ထုံးစံအတိုင်း ဝတ်စုံသုံးမျိုးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြရပါတယ်. မိမိတိုင်းပြည်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံ၊ ညနေခင်းဝတ်စုံနဲ့ ရေကူးဝတ်စုံ စသည်တို့ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြရတာဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဝတ်စုံနဲ့ ပြိုင်ကြရာမှာလည်း နိုင်ငံအသီးသီးက မယ်တွေဟာ ထူးထွေဆန်းပြား အရောင်အသွေး စုံလင်လှတဲ့ ဝတ်စုံတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ကြတဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံ တစ်ချို့ကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဖော်ပြရရင်
Miss Bolivia ရဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံ
Miss Cyprus ရဲ့ ဝတ်စုံ
Miss Ecuador ရဲ့ ဝတ်စုံ
Miss Venezuela ရဲ့ ဝတ်စုံ
Miss India ရဲ့ ဝတ်စုံကတော့ ခပ်ရိုးရိုး ဆာရီတစ်စုံပါဘဲ
Miss Indonesia ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဝတ်စုံ
Miss Philippines ရဲ့ အမျိုးသား ဝတ်စုံ
Miss Philippines ကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်စကားပြောစဉ်ကတည်းက ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးသံ လက်ခုတ်သံတို့ကို အများဆုံး ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဝတ်စုံဆုကို ရရှိသွားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် Miss China ( Jidan Xu) ရဲ့ ဝတ်စုံပါ။ ဆုရမယ်ဆိုလည်း ရချင်စရာပါ တော်တော်လက်ဝင်ပြီး ရှုပ်ရှက်ခတ်မဲ့ ဝတ်စုံပါဘဲ။
ညနေခင်းဝတ်စုံလို့ခေါ်တဲ့ ဂါဝန်ရှည်လေးတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ သိပ်ရှည်လွန်းတဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံတွေကြောင့် ဝတ်စုံကိုနင်းမိပြီး စင်ပေါ်မှာ ချော်လဲကြတဲ့ မယ်တွေ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခုပွဲမှာလည်း Miss China နဲ့ အနီရောင်ဝတ်စုံက စင်ပေါ်မှာ အတော်လေး အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဟန် ရှိပြီး ဂါဝန်စ တက်နင်းပြီး ချော်လဲခါနီး ၂ခါ လောက်ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တော့ သူလည်း ဝါဝန်လေး မကာ မကာနဲ့ လျှောက်ရပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပါးနပ်သူများကတော့ လှေခါးထစ်တွေကို ဆင်းတော့မယ်ဆိုကတည်းက ဂါဝန်လေးကို ကြိုတင်မပြီးမှသာ ဆင်းကြပါတော့တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမယ်ကလေးကနည်း ပြန်ထွက်ခါနီးမှ ဝတ်စုံဖျားကို ခလုတ်တိုက် လိုက်ပါသေးတယ်
အပြာရောင်ဝတ်စုံနဲ့ Miss Guyana ကတော့ လုံးဝကို ချော်လဲပါတော့တယ်။ သို့သော်လည်း ဟန်မပျက် ပြန်ထပြီး ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ဘဲ ဆက်လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Miss China ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံ
Albania (Adrola Dushi), Angola (Marcelina Vahekeni) and Aruba (Liza Helder) တို့ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံများ
Croatia (Elizabeta Burg), Curacao (Monifa Joanne Marie Jansen) and Ecuador (Carolina Andrea Aguirre Perez) တို့ရဲ့ညနေခင်းဝတ်စုံ
Georgia (Tamar Shedania), Guyana (Ruqayyah Boyer), Jamaica (Chantal Jaky) တို့ရဲ့ညနေခင်းဝတ်စုံ
Kosovo (Diana Avdiu), Malaysia (Kimberly Leggett), Mexico (Karina Gonzalez) တို့ရဲ့ညနေခင်းဝတ်စုံ
Paraguay (Egni Eckert), Philippines (Janine Tugonon), Puerto Rico (Bodine Koehler) တို့ရဲ့ညနေခင်းဝတ်စုံ
Tanzania (Winfrida Dominic), Thailand (Nutpimon Farida Waller), USA (Olivia Culpo) and Venezuela (Irene Sofia Esser Quintero) တို့ရဲ့ညနေခင်းဝတ်စုံ
Miss Ethiopia ကတော့ နာမည်လိုက်အောင် ခပ်ပိန်ပိန်တစ်ဖြောင့်တည်းနီးပါး ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမကတော့ ပိုစ့်ပေးတာတွေ ဘာတွေ သိပ်မတွေ့ရဘဲ ခပ်မြန်မြန်လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ တစ်ချို့မယ်တွေဟာ အပြုံးအလွန်နည်းပါတယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး သူတို့ကိုယ်စားပြုံးမိရတဲ့အထိ ဖြစ်ရပါသေးတယ်။
ညနေခင်းဝတ်စုံများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးနောက်မှာ ဆန်ကာတင် ၁၆ဦးကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ ဆန်ကာတင် ၁၆ဦးမှာ ပါဝင်သူတွေကတော့
ဆက်လက်ပြီး ဆန်ကာတင် ၅ဦးကို ရွေးချယ်ရာမှာ
Miss Venezuela – Irene Sofia Esser Quintero
Miss Philippines – Janine Tugonon
Miss Australia – Renae Ayris
Miss USA – Olivia Culpo
Miss Brazil – Gabriela Markus တို့ သာ ဆန်ကာတင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Miss Australia ကို 4th Runner up အဖြစ် ကြေငြာလိုက်ပြန်တော့ ကျန်ရစ်သူ ၄ဦးက စိတ်လှုပ်ရှား စွာ စောင့်မျှော်ကြရပါတယ်။ Miss Brazil က 3rd Runner up အဖြစ် ပန်းစည်းကို လက်ခံရယူပြီးပြန်တော့ စင်ပေါ်မှာ သုံးဦးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ Miss Venezuela က 2nd Runner up ရရှိသွားပြန်တော့ စင်ပေါ်မှာ Miss Philippines နဲ့ Miss USA တို့နှစ်ဦးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။
Miss Philippines နဲ့ Miss USA
Miss USA ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံပါ .. ကျွန်မကတော့ သူ့ဝတ်စုံကို ဖော်လွန်းနေတာကလွဲလို့ ထူးထူးခြားခြားလှပတယ်လို့ကို မထင်မိပါဘူး။
ရုပ်ရည်ရော ဝတ်စုံပါ လှပတဲ့ Miss Philippines ပါ။
ပြီးတော့လည်း သူမဟာ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတာလည်း အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဆန်ကာတင် ၅ဦးကို ဒိုင်လူကြီးများက မေးခွန်းများ မေးရာမှာ မေးခွန်းတွေကို စကားပြန်မလိုဘဲ ဖြေဆိုတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် Miss Philippines (Janine Tugonon ) ဟာ ဒီပွဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံး၊ ပရိတ်သတ် အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော် များများကလည်း သူမကို Miss Universe ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦး တစ်ယောက်လက် ကို တစ်ယောက်က ဆုပ်ကိုင်ကြရင်း Miss Universe ကြော်ငြာမဲ့ အသံကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ နားစွင့်နေကြရာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အသက် ၂၀အရွယ်ရှိ Miss USA ဖြစ်သူ Olivia Culpoက ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Miss Philippines ကတော့ First Runner up နဲ့သာ ကျေနပ် လိုက်ရပြီး ဒီတစ်ပွဲမှာလည်း နာမည်ကြီးပြီး Philippines လွဲခဲ့ရ ပြန်ပါတယ်။
မနှစ်က မယ်စင်္ကြာဝဠာ Leila Lopes က ဒီနှစ် မယ်စင်္ကြာဝဠာကို သရဖူ လွဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပါတယ်
အောင်နိုင်သူရဲ့ အလှဆုံးပြုံးချိန် (ပြုံးလိုက်ရင်တော့ သူ့အပြုံးလေးက အတော်လှသား)
ပရိတ်သတ်များကို နှုတ်ဆက်နေတဲ့ မယ်စင်္ကြာဝဠာ
အမေရိကမယ်တို့ဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀အတွင်းမှာ ရှစ်ကြိမ်မြောက် မယ်စင်္ကြာဝဠာသရဖူကို ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ရရှိခဲ့တာဟာ ၁၉၉၇ခုနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားပေမဲ့ "Miss Universe ပြိုင်ပွဲဟာ မျှတမှုမရှိဘူး။ အမေရိကန်မှာလုပ်လို့ Miss USA က သရဖူဆောင်းခွင့်ရတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ Miss Philippines ကသာ ပိုရထိုက်တယ်" စသဖြင့် အငြင်းပွားမှုတွေ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေပေါ်မှာ ကော်မန့်တွေများစွာနဲ့ complaints တွေကတော့ ထွက်ပေါ်လို့ နေပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပြောကြပါစေ။ အမေရိကတို့ကတော့ ဒီနှစ်အတွက် သရဖူကို ဆောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးစကား ~ မယ်စင်္ကြာဝဠာပြိုင်ပွဲ နီးတိုင်း အဲဒီအကြောင်းရေးဖို့ သတိတရ သတိပေးတတ်တဲ့ အစ်မ မြသွေးနီ ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရပါတယ်။ သူတိုက်တွန်းလို့လည်း ဒီလို ပိုစ့်တွေကို အခုလို သတိတရနဲ့ ရေးဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref and photo:
Links to this post 12 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, December 17, 2012 Monday, December 17, 2012 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ဒီတစ်ပတ် ခရီးသွားမှတ်တမ်းအဖြစ် မြောက်ဦးခရီးစဉ်အကြောင်း ဆက်ရေးပါဦးမယ်ရှင်... ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရခိုင်ဘုရင်တို့ တည်ထားခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း ဘုရား စေတီများ ပေါများလှတဲ့ အပြင် ရခိုင်မင်းဆက်တို့ စိုးစံခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးနန်းတော်ရဲ့ နန်းမြို့ရိုးနဲ့ နန်းတော်ရာဟောင်းကို ယခုတိုင် ခိုင်ခိုင်မာမာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ကနေ စစ်တွေကို Air Mandalay နဲ့ ထွက်ခဲ့ရာမှာ လေယာဉ်ပေါ်က ခရီးသည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိုင်ငံခြားသားများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် မြောက်ဦးမြို့ကို သွားရောက်ကြမဲ့ သူတွေချည်းဖြစ်တယ်လို့ သတိရတဲ့အချိန်မှာ မြောက်ဦးမြို့ဟာလည်း ပုဂံမြို့ဟောင်းလိုဘဲ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါလားဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက်ကတော့ မိခင်ဖြစ်သူလဲ ပါတာကြောင့် ကားလမ်းခရီးကတော့ အနည်းငယ်ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းတယ် ဆိုတာရယ်၊ အချိန်လည်း သိပ်မရတဲ့အတွက် လေယာဉ်ခရီးကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ယခုဆိုရင် ဒေသတွင်းအခြေအနေပါ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် မြောက်ဦးမြို့ဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ ခုထက်ပိုပြီး လာရောက်လှည်ပတ်ကြမဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် စစ်တွေမြို့ကနေ ကားလမ်းရော ရေလမ်းနဲ့ပါ သွားရောက်နိုင်တဲ့ မြောက်ဦးမြို့ကို ကျွန်မတို့က ကားလမ်းကနေ သွားမှာဖြစ်လို့ မနက်စောစော စစ်တွေမြို့ကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ မနက်စောစော ထွက်လာရတာမို့ မိုးမလင်းသေးတဲ့အပြင် ဆောင်းရာသီမို့ အေးလည်းအေးတဲ့အတွက် ကားပေါ်မှာ ငိုက်လာပေမဲ့ အပြင်လောကကို စပြီး မြင်ရတဲ့ ရောင်နီ သန်းချိန်မှာတော့ လမ်းဘေးဝဲယာရှုခင်းတွေက အိပ်ချင်စိတ်တွေကို ဆွဲယူပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းမနက်ခင်းရဲ့ နှင်းမြူတွေနဲ့ လှပသာယာလှတဲ့ ရှုခင်းတွေဟာ မြို့ပေါ်မှာ မြင်ဖို့တွေ့ဖို့ခက်တဲ့ အဖိုးတန် သဘာဝ ပန်းချီကားချပ်တွေ ပမာပါဘဲ။ မောင်းနေတဲ့ ကားပေါ်ကနေ ကားကခုန်၊ လက်ကတုန်တဲ့အပြင် ဖွင့်မရတဲ့ မှန်တံခါးနောက်က ဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့အခါ လိုချင်တဲ့မြင်ကွင်းကို ကွက်တိ မရခဲ့ပေမဲ့ ရသလောက်နဲ့ ကျေနပ်ရပါတယ်။ ပုံတစ်ချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြချင်ပါတယ်နော်.
မှုန်ပြာရီမနက်ခင်းမှာ ဓနိပင်တန်းတွေကလည်း လွမ်းစရာ .. ဓနိပင်တွေကတော့ အလွန်ပေါပါတယ်။
နှင်းမှုန်တို့ဖြင့် ရစ်သိုင်းခြုံလေတဲ့ လွမ်းစရာ မနက်ခင်း
နှင်းထုကိုထွင်းဖောက်ပြီး တဖြေးဖြေး ထွက်လာတဲ့နေမင်းကို ကြည့်ရတာကလည်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရသလို ညွှတ်နူးလှပလို့.. နေထွက်တဲ့ပုံထဲမှာ ဒီတစ်ပုံဘဲ ကောင်းတာ ပါပါတယ် ကျန်တာကတော့ စောင်းနေတာနဲ့ နေလုံးက ဝါးနေတာနဲ့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ မနက်ခင်းနှင်းထုတွေပါးလျလာတဲ့နောက် ကစ္ဆပနဒီ မြစ်ကြီးနဲ့ ကစ္ဆပနဒီ တံတားကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် တံတားကြီးနဲ့ မြစ်ကြီးကတော့ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆို နှုတ်ခွန်း ဆက်နေပါတယ်။ ရခိုင်မှာ ထင်ရှားတဲ့ လေးဝတီလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ မြစ်ကြီးလေးစင်းမှာ တစ်စင်း အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ကစ္ဆပနဒီမြစ်ကြီးဟာ ရခိုင် လူမျိုးတို့ရဲ့ ကြီးကျယ် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သမိုင်းအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကစ္ဆပနဒီမြစ် တစ်ဖက်ကမ်း က ကျောက်တော်တောင် ကတော့ ရခိုင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်ထွန်းကားရာ အထိမ်းအမှတ် နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ရခိုင်ဘုရင်ထံသို့ ကြွလာတော်မူတဲ့ ဒီကျောက်တော်တောင် အကြောင်းတော့ နောက်များမှ သီးသန့် ရေးချင်ပါသေးတယ်။
နာမည်ကျော် ကစ္ဆပနဒီ တံတားကြီးပါ..
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အသက်သွေးကြော မြစ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့ ကစ္ဆပနဒီမြစ်ပါ.. ကုလားတန်မြစ်လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
ကစ္ဆပနဒီမြစ်ကြီးပေါ်က ကစ္ဆပနဒီတံတားကြီးကို ကျော်လာပြီးနောက် မကြာခင်မှာတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က ရခိုင်ပြည်ကို ကြွချီတော်မူလာစဉ်ကတည်းက သွန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြတဲ့ သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း မဟာမြတ်မုနိဘုရား တည်ရှိရာ မဟာမုနိရွာကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာကားတွေအားလုံး ရပ်နားပြီး ထမင်းစား၊ ဘုရားဖူးကြပါတယ်။ မဟာမြတ်မုနိဘုရား အကြောင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ ( ဒီနေရာမှာ ) ရေးခဲ့ပြီးပြီမို့ မဖတ်ရသေးရင် ဒီနေရာမှာဆိုတာကို ကလစ်လုပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ စီးလာတဲ့ကားဟာ မဟာမြတ်မုနိ မရောက်ခင် သရက်တစ်ပင် ရွာနားမှာ ကားပျက်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကားပြင်ဖို့ နားနေချိန်မှာ ရွာထဲက လူတွေက ဘုရားနဲ့ မဝေးတော့ဘူး။ ဘုရားကို ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီနဲ့ သွားလိုက်ကြပါလားလို့ ပြောလာတာကြောင့် ကျွန်မရယ် အမေရယ် ညီမလေးရယ်တို့ဟာ မဟာမြတ်မုနိဘုရား တည်ရှိရာ မဟာမုနိရွာကို ဆိုင်ကယ် ငှားစီးပြီး ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကားဆရာကိုတော့ ဘုရားမှာ စောင့်မယ်လို့ အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ကားပျက်ချိန် အတော်ကြာတာကြောင့် ထမင်းစားပြီးနောက် ဘုရားကို အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ၊ ဖူးခွင့်ရခဲ့တာမို့ ကားပျက်တာကို ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်ရပါသေးတယ်း)
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် မဟာမြတ်မုနိရုပ်ပွားတော် (မဟာမြတ်မုနိဘုရားအကြောင်း တင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ မဖူးရသေးသူများအတွက် ဓာတ်ပုံ ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပရဝုဏ်အတွင်းက မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရဟန္တာများ ရုပ်ပွားတော်.. ( ဒီနေရာဟာလည်း နိုင်ငံခြားသား ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်ရိုက်ခဲ့တာပါ :P )
ကားပျက်တဲ့ သရက်တစ်ပင်ရွာက ရွာသူ ရခိုင်သူမတွေပါ။
ရခိုင်တွေဟာ ခုလို ဒန်အိုးကို တစ်ပြည်နယ်လုံး သုံးကြတာမို့ စစချင်းမှာတော့ တစ်ခြားဒေသတွေနဲ့ မတူတဲ့အတွက် အမြင်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာ ဒီလိုအိုးကိုသာ သုံးကြတာမို့ တွေ့ဖန်များတော့မှ အထူးအဆန်းမဖြစ်မိတော့ပါဘူး။ သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ ရေအိုးကို ကျွန်မ ညီမက သဘောကျပြီး ခဏတောင်းယူကာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခံတော့ ဘေးကလူတွေ တဝါးဝါးနဲ့ ပွဲကျခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီရွာမှာ ကားပျက်တဲ့အချိန်ဟာ အတော် ကြာသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ကို ရောက်ချိန်ဟာ ခန့်မှန်းထားတာထက် အများကြီး နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ မူလအစီအစဉ်က မြောက်ဦးမှာ ၂ရက်လောက် နေပြီး ငပလီကို ခရီးဆက်ဖို့အတွက် သံတွဲ လေယဉ်လက်မှတ်ပါ တစ်ခါတည်း ဖြတ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြောက်ဦးမြို့ထဲ ဝင်ချိန်မှာတော့ အချိန်နောက်ကျတာရော၊ များပြားလှတဲ့ ဘုရားတွေ ဖူးဖို့ဆိုတာ ကျန်ရှိတဲ့အချိန် တစ်ရက်ကျော်ကျော်နဲ့ ဘယ်လိုမှ လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိတာကြောင့် နောက်ထပ် ၂ရက်တိုးပြီး ၄ရက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သံတွဲကိုသွားဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ် ဖြတ်ခဲ့တဲ့ Air Bagan (စစ်တွေ)ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကျွန်မဝယ်ခဲ့တဲ့ လက်မှတ်ကိုနောက် ၂ရက် နောက်ဆုတ်ပြီး ရွေ့ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အခါ Air Bagan က လွယ်လွယ်ကူကူ ၂ရက် ရွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘုရားတွေကို စိတ်အေးလက်အေး အသေးစိတ် ဖူးခွင့်ရတာကြောင့် AirBagan စစ်တွေရုံးခွဲက လက်မှတ် စီစဉ်ပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောချင်ပါတယ်။ လက်မှတ်ဝယ်နေတုန်းမှာ သူတို့ စားပွဲပေါ်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေး တစ်အုပ်ကိုလည်း ကျွန်မစာရေးရင် အကိုးအကားပြုဖို့ လိုချင်တာကြောင့် ပြန်ရောင်းပါလားလို့ဆိုတော့ သူတို့က ယူသွားပါဆိုပြီး လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ မဂ္ဂဇင်းအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
နဝရတ်ဟိုတယ် ရောက်ပါပြီ.. ဟိုတယ်ရဲ့ တံတိုင်းတွေက ရှေးဟောင်းပုံစံ တည်ဆောက်ထားတာပါ။
မြောက်ဦးကို မဖြစ်မနေသွားချင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကို ပိုပြီးခိုင်မာစေတာက Flickr.Com မှာ တွေ့လိုက်တဲ့ မြောက်ဦးမြို့ရဲ့ မနက်ခင်း ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံပါ။ အဲဒီပုံလေးကို မြင်လိုက်တာနဲ့ မြောက်ဦးကို သွားဖြစ်အောင် သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြောက်ဦးကိုသွားရမဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ တည်းခိုရမဲ့ ဟိုတယ်၊ ဆက်သွယ်ရမဲ့ သူတွေကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ မြောက်ဦးဓာတ်ပုံပိုင်ရှင် ဦးစိုင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောကြားလိုပါတယ်။ မြောက်ဦးကို မရောက်ခင် ကတည်းက ကျွန်မတို့အတွက် အစစ အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတဲ့ မြောက်ဦးမြို့ နဝရတ်ဟိုတယ်က ရခိုင်သူလေး ညီမလေးမကျော့ကိုလည်း ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ သူ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက် ဘုရားတွေ စုံအောင်၊ နေရာတွေ စုံအောင်လည်း ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မြောက်ဦးမှာ ရှိစဉ်အတွင်း သွားဖို့လာဖို့ ကားတွေ၊ စက်လှေတွေကအစ စီစဉ်ပေးပြီး ဘုရားသမိုင်းတွေကိုလည်း မြေပုံနဲ့တကွ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးတာကြောင့် ညီမလေးမကျော့ဟာ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြောက်ဦးရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကားဂိတ်မှာ မကျော့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ကား လာစောင့်နေတာကြောင့် အဆင်သင့်စီးပြီး နဝရတ်ဟိုတယ်ကို ရောက်လာရပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ ရေမိုးချိုးခဏတဖြူတ် နားပြီးတာနဲ့ ကားနဲ့ဘဲ လေ့လာရေးခရီး စတင်ပါတော့တယ်။ စစချင်း ဟိုတယ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ မြောက်ဦးနန်းတော်ဟောင်းကို အရင်ဝင်ပြီး လေ့လာကြပါတယ်။ မြောက်ဦးမြို့ရဲ့ နန်းတော်ဟောင်း အကြောင်းနဲ့ မြောက်ဦးမြို့ရဲ့ လှပအေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်း ဓာတ်ပုံများကိုတော့ နောက်ထပ်ပိုစ့်မှာ သီးသန့် ဖော်ပြပါမယ်ရှင်.. အားလုံးဘဲ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုပေးကြတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် လို့နော်။
ဂရိတျဖောသှား တောလား ...
Instagram photos (7).....